Maxaa kasoo baxay kulankii Xalay dhaxmaray Ahlu-Sunna iyo Wasiirka Arriamaha Gudaha - Awdinle Online
Maxaa kasoo baxay kulankii Xalay dhaxmaray Ahlu-Sunna iyo Wasiirka Arriamaha Gudaha
October 22, 2019 (AO) – Wararka naga soo gaaraya Magaaladda Dhuusamareeb ayaa sheegaya in xalay kulan gaar ah oo u dhexeeyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo Hoggaanka Sare ee Ahlu Sunna Waljamaaca uu ka dhacay Gurigga Sheekh Shaakir Cali Xasan ee Dhuusamareeb.
Kulanka oo ahaa mid aad xasaasi u ah ayaa waxaa inta badan diirada lagu saaray mad madowga siyaasadeed ee u dhexeeya labada dhinac, gaar ahaan guddiga farsamada ee Dowladda Federaalka ay sameysatay, kuna dooneyso in maamulato doorashiiyinka Galmudug.
Sidoo kale shirka oo qaatay saacado aad u badan ayaa lagu soo qaaday, sidii looga qancin lahaa Ahlu Sunna tabashada ay ka qabto dhismaha guddigaasi.
Wararka ayaa sheegaya in weli aan la gaarin xal rasmi ah, balse uu jiro isku dhowaansho labada dhinac ah, iyadoona markale lagu balamay kulamo kale.
Dhinaca kale warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in laga yaabo in saacadaha soo socdo Dhuusamareeb uu dib ugu laabto Ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre, si ugu yaraan Ahlu Sunna loo qanciyo, kadibna loo sii guda galo lahaa wajiga labaad ee dhismaha Galmudug.
Xaaladda Galmudug oo muddo dheer is jiid ku jirtay ayaa waxaa la qorsheynayaa in isbedal maamul iyo doorasho ay ka dhacdo, si loo dhiso Galmudug oo loo dhan yahay.
Previous articleSOMALI REFUGEE IS NOW DIRECTING THE SEATTLE CLINIC THAT TOOK CARE OF HER AS A CHILD
Next articleAhlu-Sunna Oo Guddi Cusub U Magacaawday Doorashada Galmudug